Sadex nin oo lagu dilay magaaladda Gaarisa maqribkii kadib.
Dec 10, 2012 (QOL) War hordhacay oo naga soo gaadhaya magaaladda Gaarisa ayaa sheegaya 3nin oo Soomaali ah in xalay fiidkii lagu dilay magaalada Gaarisa, sida uu warbaahinta Qorahay u xaqiijiyay mid kamid ah dadkii ka agdhowaa goobta dilku kadhacay oo rasaasta maqlayay ayaa sheegay in 3nin lagu dilay meesha loo yaqaano Gaarisa yarey xili maqriboodkii ah, qofkii falkaas sameeyayna uu rasaas ooda kaga qaaday halkaas uu kabaxsaday.
Wali manaan helan dadka ku dhaawacmay inta ay dhanyihiin waxayse wararku sheegayaa in ay jiraan dhaawacyo loo sii qaaday Isbitaalka magaalada.
Wararku waxay intaas ku darayaan in nimanka la dilay mid kamid ah uu ka tirsanaa dawladda Kenya halka labada kale ay shacab ahaayeen, Ilaa & hadda nama soo gaadhin magacyadda dadka lagu dilay Gaarisa waanse ku raad jognaa in aan helo magacyadooda.
Magaaladda Gaaris ayaa mudooyinkii dambe ka dhacayeen qaraxyo kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay meelo kamid ah magaalada Gaarisa lamana garanayo dadka amaan darada ka wada Magaalada Gaaris oo caan ku ah nabada & wada noolaanshada qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Gaarisa.
Si kastaba ha ahaatee dadka shacabka ah ayaa walaac ka muujinaya dilalka ka dhacaya magaalada Gaarisa ayaga oo in badan dawladda ka codsaday in ay baadhitaan xoogan sameyaan dadkaas amaan darada ka wada magalada.
Wixii ka soo kordha kala soco Qorahay Media.